Axmed Madoobe “Barre Hiraale cidii markab ku geysay Kismaayo ayaa laga rabaa inay hadana soo kaxeyso” | Salaan Media
Axmed Madoobe “Barre Hiraale cidii markab ku geysay Kismaayo ayaa laga rabaa inay hadana soo kaxeyso”
Hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Madoobe ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan Ciidamada Barre Hiiraale iyo dhalinyarada u dagaalanta Shabaab, hadii ay isu soo dhiibaan maamulkiisa.
Axmed Madoobe oo shalay shir jaraa’id ku qabtay Kismaayo ayaa sheegay in maamulkiisa nidaam u diyaariyay cidii ka soo goosata Shabaab, isagoo ka hadlay xaalada Barre Hiiraale oo uu xusay inuu Al-Shabaab la joogo.
Waxaa uu sheegay in looga baahan yahay cidii Barre Hiiraale markab ku geysay Kismaayo inay ka soo kaxeyso, isagoo xusay in hadii Al-Shabaab la joogo iyo col kale, waxaana uu xusay in mashruuciisa uu dhamaaday.
Sidoo kale Axmed Madoobe ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu gacan bir ah ku qabanayo ammaanka, isla markaana ciidamada ay habeen iyo maalin sugi doonaan ammaanka magaalada Kismaayo.
Barre Hiiraale oo ka mid ahaa siyaasiyiin looga itaal roonaaday dagaal ka dhacay Kismaayo labo bil ka hor, waxaana uu dhowaan iska fogeeyay inuu ku biiray Shabaab, isla markaana uu ku sugan yahay deegaano duleedka ka ah Kismaayo oo Al-Shabaab ay ka taliyaan.